Tucos kuti uwane zvakanakisa kubva paWhatsApp | IPhone nhau
WhatsApp ndeye kusingaperi kunyorera, iyo inotora chikamu chakakura chemaawa ekuvharira evazhinji vashandisi vanoverenga iyi blog. Nekudaro, WhatsApp ndiyo inonyanya kufarirwa kushambadzira mameseji pasi rose, nekudaro, iko kushanda kwakawanda kwatinoshandisa zvakanyanya pazvinhu zvedu. Naizvozvo, zvakanaka kuti uzive hunhu hunonyanya kufadza hwatinogona kushandisa kubva kuWhatsApp, kunyange hazvo husiri hwakawanda, sezvo WhatsApp iri yakapfava uye yakapfava kunyorera isina mabasa anoshamisa akadai semakwikwi (Teregiramu kana Facebook Messenger), zvisinei, Humwe hunyengeri kana paine kuti uwane kuita kwepamusoro uye mu iPhone News tinoda kukuudza zvese, saka haungashaikwe kana imwe chete.
Chekutanga pane zvese, ini ndinofanira kuyeuka izvo kune vashandisi zvimwe «Nyanzvi»Zvizhinji zvemanomano aya anenge achitozivikanwa, zvisinei hazvimborwadzi kuyeuchidza avo vanoshandisa zvakapusa zvekushandisa kana avo vasina fivha yekutumira mameseji pamusoro. Tiri kuenda kudonongodza mamwe matanho anonakidza kusvina WhatsApp.
1 WhatsApp Webhu, tora WhatsApp kuPC yako
2 Kudzivirira WhatsApp mapikicha kubva kuchengetwa paKamera Roll
3 Pindura usina kupinda mukushandisa
4 Shandisa zvakashinga, tatsveyamisa, uye rova ​​kukwirisa kukoshesa
5 Tsvaga zvirinani zvinongedzo, multimedia kana zvinyorwa mumagwaro
6 Usakanganwa kuita backup makopi paunoona ari nyore
WhatsApp Webhu, tora WhatsApp kuPC yako
WhatsApp Webhu ndeyenhema yeiyo desktop desktop. Kusiyana neTeregiramu uye zvimwe zvinoshandiswa, zvine yavo application kana chirongwa cheese PC neMac, mune nyaya yeWhatsApp tinowana mhando yewebhu mutengi isiri iyo chaiyo, iri girazi rakareruka renhare yedu iro rinorishandisa sevhavha, saka rinoshandisa bhatiri rakawandisa seyero yedata munzira, asi ichakwanisa kuita hunyengeri pane inopfuura kamwe chiitiko, kunyanya muhofisi. ukuwo shefu asiri kutarisa. Muchiitiko cheMac OS isu tine chaiwo mafomu, senge ChitChat, kuti kunyangwe isiri mhinduro, irongwa hwekuda kuziva.
Tichava nechikamu cheWhatsApp Web chinonyatso kuoneka, isu tinongofanira tinya pane "zvigadziri" mukati meWhatsApp uye isu tichaona WhatsApp Web mune mumwe wemitsara yekutanga. Isu tinongofanirwa kuongorora iyo QR kodhi kuti iite kuti ishande.
Kudzivirira WhatsApp mapikicha kubva kuchengetwa paKamera Roll
Isu tese tiri chikamu cheboka risinganzwisisike (mune iyo Anglo-Saxon pfungwa yezwi) iyo isingamire spamming nemavhidhiyo akasarudzika nemifananidzo. Dambudziko nderekuti patinorega amai vaone mafoto evana vedu kana vevakoma pane nharembozha yavo uye vozowanawo aberrations. Kune izvi, chinhu chakanakisa ndechekudzivirira yedu iPhone kubva kunochengetera iwo akadhirowewa mafoto pane reel, mu Chat Zvirongwa isu tinowana iri basa kuti riimise iyo.
Pindura usina kupinda mukushandisa
Kazhinji nguva mhinduro ichave inogoneke, saka tinogona kupindura takananga kuWhatsApp kunonoka asi kushanda kwese kugadzirisa mhinduro dzinokurumidza. Isu tinotsvedza ziviso pasi kana ichangobva kuoneka kana kuruboshwe kana iri munzvimbo yekuzivisa uye isu tinopfuurira kupindura. Zvakare, usaudza chero munhu, kana tikashandisa iyi nzira yekupindura haizomirwi sechikwekwe chebhuruu dzimwe hurukuro dzese, zvinoita sekunge isu hatipo.
Shandisa zvakashinga, ityai and the kuyambuka yekusimbisa
WhatsApp kubvira iyo yekupedzisira yekuvandudza inobvumira kushandiswa kwemashoko akapfuma, zviri nyore kwazvo, isu tinongofanirwa kutevedzera nhanho idzo isu tinoratidza muchinyorwa chino kubva pamavhiki mashoma apfuura. Ivo vanogamuchira vane iyo application vanozovandudza vanozoona shanduko pachiratidziri, chimwe chinhu chinonakidza kuyedza kupa kukoshesa kana kudoma kune mamwe mazwi.
Tsvaga zvirinani zvinongedzo, multimedia kana zvinyorwa mumagwaro
Nekudaro, mukushayikwa kweinotsvaga injini yekutsvaga (iyo zvakare iinayo), WhatsApp yakaisa mune yega yega hurukuro nzvimbo yatinogona kukurumidza kuenda kune zvirimo. Nekuda kwechikamu chino isu hatigone chete kuona mafoto nemavhidhiyo senge pakutanga, ikozvino tinogona kuwana iyi link yemashoko akakosha akapfuura kwatiri shamwari mazuva mashoma apfuura. Kana tikabaya pazita reboka kana kutaurirana, ruzivo rwekukurukura ruchazaruka, uye tichaenda ku "multimedia, zvinongedzo uye maHTML" kuti tivaone ese.
Usakanganwa kuita backup makopi paunoona ari nyore
Hazvaigona kuve nyore, machats edu haana kungochengetwa pane chishandiso, asi zvakare muCloud, kuti tikwanise kudzoreredza hurukuro pese patinoda. Mune Masystem> Chats> Chats Kopa Tichakwanisa kuona kuti yaive riini nguva yekupedzisira kugadzira imwe, sarudza kuti tinoda kuti zviitwe kangani uye kana tichida kuti inge ichisanganisira mavhidhiyo (ayo asingaasanganisi nekutadza).
Mumazuva mashoma tichakuunzira chechipiri chikamu kuti ndikupe imwe yakawanda yeWhatsApp manomano. Kana iwe uchiziva yakakosha uye uchida kuigovana, inzwa wakasununguka kuisiya mubhokisi remashoko. Sekuwedzera kwekunyepedzera, pano tinotsanangura kuti sei kumanikidza mavhidhiyo eWhatsapp uye saka unogona kutumira akareba mavhidhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Tricks kuti uwane zvakanakisa kubva paWhatsApp pane yako iPhone (1/2)
Mhinduro yekukurumidza yeWhatsapp ndeipi shoma iOS vhezheni inoda? Ndine 9.0.2 mune yazvino vhezheni yeWhatsapp uye handigone kuzviita.
hunyengeri hwakanaka chaizvo ndewekushandisa kutsvaga kwekutsvaga kutsvaga vanobatika